ဆရာတော် ဦးဇောတိက တရားထဲမှ ကျန်းမာရေးအတွက် သိကောင်းစရာများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ဆရာတော် ဦးဇောတိက တရားထဲမှ ကျန်းမာရေးအတွက် သိကောင်းစရာများ	16
ဆရာတော် ဦးဇောတိက တရားထဲမှ ကျန်းမာရေးအတွက် သိကောင်းစရာများ
Posted by padonmar on Feb 18, 2016 in My Dear Diary | 16 comments
14.2.2016 ညနေ ၅နာရီ ၄၅ မိနစ်တွင် မထက်ထက်ထွန်း အိမ်၌ ဟောကြားပေးသော ဆရာတော် ဦးဇောတိက တရားထဲမှ ကျန်းမာရေးအတွက် သိကောင်းစရာများ
(၁) ကျန်းမာဖို့အတွက် အစာ အများကြီး စားစရာ မလိုပါ။ အချိုဓာတ်ကနေ Cholesterol အဖြစ်ပြောင်းစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အချိုကို လျှော့စားရပါမယ်။
အစာစားတဲ့အခါ အဆာပြေပြီဆိုရင် ရပ်လိုက်ပါ။ လူရဲ့ ဦးနှောက်က အစာစားပြီး အချိန်အနည်းငယ်ကြာလို့ သွေးထဲက အချိုဓာတ်တက်လာမှ ဗိုက်ဝတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဗိုက်ဝပြီ ဆိုမှ ရပ်ရင် လိုအပ်တာထက် ကိုယ်ထဲကို ပိုဝင်သွားပါပြီ။
(ဘုန်းဘုန်းဆို ဆီးချို ရှိတာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားပြီး အစားထိန်းထားရုံနဲ့ ဆီးချို မတက်တော့ပါဘူး၊ အစာလျှော့တဲ့ အတွက် လူကလည်း ပိန်မသွားပါဘူး။)
Longevity ဆိုတဲ့ အသက်ရှည်ကြောင်းစာအုပ်ထဲမှာ အနှစ်ချုပ်တော့ အစာ လျှော့စားပါ လို့ ပြောထားတာချည်းပါပဲ။
(၂) စကားပုံ ရှိပါတယ်။` ခြေထောက်မှာ ရှိန်၊ ၀မ်းမှာ ပိန်´ တဲ့။
ဆိုလိုတာက ခြေထောက်မှာ အပူရှိန် ရှိအောင် နေရပါမယ်။
၀မ်းကို ပိန်အောင် ဗိုက်မပူအောင် ထားရပါမယ်။
ဘုန်းကြီးဆို ခြေထောက်ကို အမြဲ ခြေအိတ် စွပ်ထားပါတယ်။
(အခု ညနေကတော့ ရာသီဥတုကလည်းပူ ချွေးလည်း ထွက်နေလို့ ခြေအိတ် မ၀တ်တာပါ)
ခြေထောက်ကို နေ့စဉ် ရေနွေးစိမ်ပါတယ်။
ဂျင်းကို ပါးပါးလေးတွေ အ၀ိုင်းလိုက်လှီး၊ပြီးရင် သေးသေးအမျှင်လေးတွေ ပြန်စိတ်ထည့်ပါတယ်။ဒါမှ ဂျင်းထဲက အဆီဓာတ်က ရေထဲမှာ ပျံ့နှံ့သွားအောင်ပါ။ သံပုရာသီး တခြမ်းလောက် ညှစ်ထည့်ပါတယ်။ ဆား(သို့) ဆားခါးတဇွန်းထည့်ပါတယ်။ရေနွေးအကြမ်းပန်းကန်လေးထဲမှာ ရေနွေးနဲ့ ခဏစိမ်ပါတယ်။ နောက်မှ ဇလုံထဲမှာသွန်ထည့်၊ ရေနဲ့ ရေနွေးကို အပူခံနိုင်ရုံ ခြေမျက်စိမြုပ်ရုံလောက်ထည့်ပြီး စိမ်ပါတယ်။ သုံပုရာသီးက Vitamin C ရပါတယ်။ဂျင်းနဲ့ ဆားခါးက အညောင်းအညာပြေစေပါတယ်။အရေပြားကလည်း ဒီဓာတ်တွေကို စုပ်ယူပါတယ်။ ခြေထောက်စိမ်ပြီး စာဖတ်ချင်ဖတ်၊တရားမှတ်ချင်မှတ်ပေါ့။ စိမ်ရင်း အေးသွားရင် ရေနွေး ထပ်ထပ်ဖြည့်ပေးပြီး နာရီဝက်-၄၅ မိနစ်လောက် စိမ်ပါတယ်။
မှန်မှန်လုပ်ပေးရင် အကျိုးထူးပါတယ်။ခြေထောက်ညောင်းညာတာမက တကိုယ်လုံးအတွက် ကောင်းပါတယ်။
(၃)အစာစားတဲ့အခါ အသီးအရွက်ကို ဦးစားပေးစားတာ ကောင်းပါတယ်။ ပဲကလည်း ပရိုတင်းရတဲ့ အတွက် စားသင့်ပါတယ်။ ထမင်းကိုတော့ လျှော့စားပါ။ တချို့ဆို ပန်းကန်လုံးထဲ ထမင်းဖွဖွထည့်၊ ပန်းကန်ပြားအလယ်မှာ မှောက်လိုက်တော့ လုံးလုံးလေး လှနေတာပေါ့။ပြီးတော့မှ ဘေးမှာ စားချင်တဲ့ အသီးအရွက်၊အသား/ငါးနည်းနည်း အလှပြင်ပြီး စားကြပါတယ်။ ၀သလားဆို ဘယ်ဝပါ့မလဲ။ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ပဲ စားမယ်ဆိုပြီး ချင့်ချိန်စားကြပါတယ်။ ဒါဟာ အသက်ရှည်နည်း လမ်းကောင်းတခုပါပဲ။
(၄)ဘုန်းကြီးက ဆေးဆို အများကြီး မသောက်ပါဘူး။တခြမ်း တစိတ်ပဲ သောက်ပါတယ်။ဆေးသောက်ပြီးရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် သတိထားကြည့်နေပါတယ်။ဘုန်းကြီးက မတည့်တာ တခုခုစားမိရင်လည်း ချက်ခြင်းသိပါတယ်။ ဆေးကိုလည်း sensitive ဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနည်းသောက်တာနဲ့ ရစေချင်တဲ့ ကောင်းကျိုး ကို ရတတ်ပါတယ်။ ဆေးဆိုတာ side effect ရှိတာချည်းပါပဲ။ တတ်နိုင်သလောက် အနည်းဆုံးသောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
(၅) အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေ ဆိုတာ မသောက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ လူရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်မှာ သူ့ကိုယ်သူ အလိုလို ပြုပြင်ပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ဒီလို ပြန်ပြင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့ နာတယ်ဆိုတာကို ဦးနှောက်က သိဖို့လိုပါတယ်။ အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးမှာ အနာပျောက်စေတာ၊အယောင်ပျောက်စေတာပါသလို ဦးနှောက်က အဲဒီ နာကျင်တဲ့နေရာကို မသိအောင် လုပ်ပေးတဲ့ အာနိသင်လည်း ပါပါတယ်။အဲဒီတော့ ခန္ဓာကိုယ်က ကိုယ့်ဖာသာ ပြန်ပြီး ပြုပြင်ဖို့ကို မသိတော့ပါဘူး။ ရောဂါ ပျောက်ဖို့ ပိုကြာသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေ ကို တတ်နိုင်သ၍ မသောက်ပဲ သည်းခံပြီး နေသင့်ပါတယ်။
(၆) စိတ်တိုတာ စိတ်ဆိုးတာတွေဟာ အသက်ကို တိုစေတတ်တာကြောင့် စိတ်ကို ချမ်းသာအောင် နေပါ။ပူပင်သောက နည်းအောင်နေပါ။
(၇) အစာစားရာမှာ လောဘ၊ဒေါသ မပါပါစေနဲ့၊ လောဘက ကြိုက်တာတွေ စားမယ် ထပ်ထပ်ထည့်ပေါ့။ ဒေါသက ငါပြောထားရက်နဲ့ မကြိုက်တာတွေ ချက်တယ်၊ငါ့ကို ပစ်ထားတယ် ဆိုတာ မျိုးပေါ့။သတိနဲ့နေရင် သူတို့ အဆင်မပြေသေးလို့ ဖြေတွေးပြီး ရှိတာလေးနဲ့ သင့်ရုံစားလိုက်တာပါပဲ။
(၈) အရိုးရှင်းဆုံးနေတာ ဘ၀တွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
သတိရှိ၍ ကိုယ်ကျန်းမာ စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် တရားတော်နှင့်အညီ နေနိုင်ကြပါစေ။
(ဆရာတော့်တရားကို မှတ်မိသ၍ ပြန်ရေးတဲ့ထဲမှာ အကြားမှားတာပါရင် ပြင်ပေးကြစေလိုပါတယ်။)
သင့်အေးရိပ် says: အဲ့ဒီ ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဆိုတာ…
စာအုပ်တွေ ရေး ထုတ်နေတဲ့ ဦးဇောတိက( မဟာမြိုင်တောရ) လား… တီဒုံ… စကားတွေ မှတ်သားစရာမို့… မှတ်သွားပါကြောင်း …
kai says: ဘုန်းကြီးက.. ကျန်းမာရေးအတွက်ပြောတာကို ဆရာဝန်ကပြန်ရှယ်နေတယ်..။
နောက်ဆို.. ဆေးကုချင်ရင်.. ဘုန်းကြီးဝတ်..။
ကောင်းသား.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6348
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: အန်တီဒုံ
ဈာန်​ says: အန်​တီဒုံ၏ သဂျီးထံသို့ထု​ချေလွှာ ရွာဂရုထဲတွင်​ ကူးတင်​ဖို့​ပြောထားပါသဖြင့်​ ……
ရွာကလည်း ရွာလည်နေတယ်။စူပါဇီးကွက်နဲ့ တိုးနေသလားမသိ။အ၀ိုင်းလည်ပြီး ၀င်မရ။ သူကြီးကို ချေပဖို့ လုပ်မရ။
သဂျီးရေ။ ဆရာတော် ဆိုတာပါတာနဲ့ သဂျီးက တီဆားနဲ့ တို့သလို ဖြစ်တော့တာပဲကိုး။
ဘုန်းကြီး ဆိုတာထက် ဒီဆရာတော်က ဘာမဆို သတိနဲ့ သေချာလေ့လာဆန်းစစ်တတ်တဲ့ စရိုက်ရှိလို့ researcher လို သဘောထားကြည့်ပါ။ ဆရာတော်က စာကိုလည်း သေချာ ဖတ်ပြီး လေ့လာပြန်ရှင်းပြပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း သူ့ကိုယ်သူ သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ပြီး ပြောတာပါ။
ဆရာတော် လမ်းညွှန်တဲ့ထဲမှာ ဆရာဝန်အမြင်နဲ့ သိပ်လွဲချော်တာ မတွေ့ပါဘူး။ဒေါ်ခင်နွယ်ဝင်း ဟောပြောတဲ့ Functional medicine နဲ့လည်း ဆင်ပါတယ်။ ဘုန်းကြီး တရားထဲက ကျမက ကျန်းမာရေး နဲ့ ဆိုင်တာကို စိတ်ဝင်စားမယ့်သူတွေအတွက် သက်သက်ဆွဲထုတ်ပြီး အဆင်သင့်စုပေးတာပါ။
ကျမက ဆရာဝန်ဆိုပေမယ့် ၂၅ နှစ်လောက် ဒီစာတွေ မလေ့လာတော့တဲ့ အရည်ပျော် ဦးနှောက်ပါ။ ဆရာတော်က ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ လေ့လာနေတဲ့ သုတေသီပါ။ဒါဆိုရင် အရည်ပျော်ဦးနှောက် ဆရာဝန်က ကျန်းမာရေးသုတေသီရဲ့ စာကို share ဖို့ သင့်မသင့် ဖြေကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာ တခုကို သိပေမယ့် သူများ နားးလည်အောင် ရှင်းပြနိုင်စွမ်းက တဦးနဲ့တဦး မတူပါဘူး။
ဆရာတော့်မှာ အဲဒီ အစွမ်းရှိလို့ ပညာတတ်တွေ လေးစားတာပါ။
ဆရာတော့် အယူအဆတွေကိုလည်း လက်ခံပါတယ်။ ဆရာဝန် အများစုနဲ့ မကိုက်မှာကတော့ ဆေးကို ညွှန်းတာထက် လျှော့သောက်တယ် ဆိုတာပဲ။ ကျမကတော့ လူတွေဟာ တယောက်နဲ့တယောက် ခံနိုင်ရည်ချင်း မတူတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကဲခတ်နိုင်စွမ်းရှိရင် ကိုယ့်ဖာသာပဲ ချင့်ချိန် ဆေးသောက်တာကို အားပေးပါတယ်။
ဆရာတော်က အမြဲံဟောနေကျဟာ သတိရှိဖို့ပါပဲ။ဒီကျန်းမာရေး ကိစ္စမှာလည်း သတိရှိရှိနေဖို့ စားဖို့ အဓိက ပြောချင်တာပါ။
ကဲ သဂျီး မကျေလည်လည်း အခြားလူတွေ တော့ ကျေလည်လောက်ပါတယ်နော။
kai says: လေ့လာနေသူက.. သူတေသီက.. ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ… ပရိုဖက်ရှင်နယ် မဟုတ်ပါဘူး…။
ပရိုက.. ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ.. စာမေးပွဲ.. စစ်ဆေးချက်အဆင့်ဆင့်အောင်ပြီး.. အောင်လက်မှတ်( ပရိုလက်မှတ်) ရှိထားရပါတယ်..။ ထိုက်သင့်တဲ့.လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိထားရပါတယ်..။ ပုံမှန်လေ့လာဆန်းစစ်.. စာမေးပွဲဖြေ.. လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးထားရပါတယ်..။
ဆိုတော့.. ကြားချောင်ဝင်နှိုက်သူမှာ..ပရိုမဟတ်သူမှာ.. တာဝန်ယူမှု..တာဝန်ခံမှုမရှိနိုင်ပါဘူး…။
မတော်… သူ့စာကြောင့်.. ယုံပြီးလိုက်လုပ်တဲ့သူ.. လူအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်..ထိခိုက်ခဲ့ရင်… ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ..။
ယူအက်စ်ကျတော့.. အဲလိုတွက်ရတယ်လေ..။ အဲဒါဆိုလိုရင်း..။
ဆိုတော့.. အခုစာကတော့..ကျန်းမာရေးကိစ္စဖြစ်တာမို့.. ပရိုလက်မှတ်ရထားတဲ့.. အမတော်ပုဒုမ္မာက..တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့သဘောဖြစ်တော့တာပေါ့..။
သုဘရာဇာ သံချောင်း says: ကျုပ်​မှာ​တော့ အဲ့ လက်​မှတ်​မရှိဘူးဗျ
ဒါ​ပေသိ သဂျီးအတွက်​ဆိုရင်​​တော့ တတ်​သ​လောက်​မှတ်​သ​လောက်​ စည်​စည်​ကားကားဖြစ်​​အောင်​လုပ်​​ပေးပာ့မယ်​ တီလုပ်​လိုလား ဘိရုမာလိုလား ကီလားလိုလား ခွစ်​ရှန်​ လိုလား ကြိုတဲ့ပုံစံ​ပြော ပြာကျတဲ့အထိမီးတိုက်​မလား
ဖွတ်​ကလိဒင်္ဂါး ဘယ်​​လောက်​သုံးပြီးသဂြုင်္ိ မလဲ
ကြိုက်​တာ​ပြောဗျာ စိတ်​ကြိုက်​ဖြစ်​​စေရမယ်​ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14466
kai says: ကျုပ်သေရင်..
အပေါ်ပိုင်းကို.. မပုပ်သွားပဲ.. ကြာလေ..ခြောက်လေဖြစ်အောင်.. အသားခြောက်သွေ့ဆေးသွင်းပေးပြီး.. ရွှေမှုန်ဖြန်းရွှေချပေး…။
အောက်ပိုင်းကိုတော့.. အရိုးတွေ အလုံးအလုံး ပုတီးကုန်းဖြစ်သွားအောင်… ကယ်လ်ဆီယမ်ပာဗွန်နိတ်ကို.. ကြွေဓာတ်လေးပါတင်ပြီး.. မီးချိန်ဆပေးနိုင်မလား..။ ပိုစွမ်းရင်တော့.. အရိုးပြာ..ကာဗွန်လုံးတွေကို.. စိန်ဖြစ်တဲ့အထိ.. ဖိအားနဲ့အပူချိန်ပေးပေးပေါ့..။
Memorial Diamonds – Real Diamond Made From Cremation …
Memorial Diamonds – UK Based – We turn your loved one’s cremation ashes or … Director and founder Mike Kelly, has been supplying man-made diamonds …
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .သဂျီးဝင်မွှေတာနဲ့ ဘာမန့်ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူးဗျာ
.ကျေးဇူးပါအာတီဒုံ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: သူကြီး​ပြောတာ သ​ဘောကျလို့ တစ်​​ယောက်​ထဲပြုံးမိသွားတယ်​ ။ မှန်​လွန်း​နေသလားလို့ ။ ကျ​နော်​တို့ဆီမှာ​တော့ ပါရဂူ ​တွေလာထိုင်​တဲ့ ​ဆေးခန်းသွားရင်​ ထိုး​ဆေးမထိုးပဲ ​သောက်​​ဆေး​တွေချည့်​​ပေးတာကြုံဖူးလို့​လေ ။ ​သောက်​​ဆေးများ ဘယ်​​လောက်​ထိ​ပေးလဲ ဆိုတစ်​ခါ​သောက်​ လက်​တစ်​ဆုတ်​စာ​လောက်​ ​ပေးတာရှိရဲ့ ။ ​ပေးတဲ့​ဆေး​တွေကလည်း သာမန်​အပြင်​မှာ ၀ယ်​မရနိုင်​တဲ့​ဆေး​တွေ ပါရဂူမှ ​ပေးခွင့်​ရှိဆိုပဲ ။ အဲ့ဒိ​တော့ ပါရဂူ ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်​​တွေက မလိုအပ်​ပဲနဲ့​တော့ ​ဆေး​တွေ အများကြီးမ​ပေး​လောက်​ဖူး ထင်​တာပဲ​လေ ။ သူ့ပညာရပ်​နဲ့ သူ့​နေရာ ​နေတာ လူမှန်​​နေရာမှန်​ဖြစ်​လိမ့်​မယ်​ ထင်​တာပဲ ။
Ma Ma says: အဲဒါတွေကြောင့် ဟိုးရက်က Oxford ဆရာတော်တရားနာရတော့ သဂျီးကို သတိရမိတာ။
အဲဒီဆရာတော်နဲ့ သဂျီးကို တွေ့စေချင်လိုက်တာ။
အဲဒီဆရာတော်မှပဲ သဂျီးကို ကျေလည်အောင် ရှင်းနိုင်ပြောနိုင်မယ်။
kai says: သူကခုံမြင့်ကြီးမှာထိုင်.. ကျန်သူတွေက အောက်မှာထိုင်ရလား..။
အဲဒီ ၂ခုကလွတ်ရင်.. အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနဲ့.. ဆွေးနွေးခြင်းစလို့ရမယ်ထင်တာပဲ…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ကိုယ်တိုင်တော့ ဘုန်းကြီးနဲ့ တန်းတူထိုင်ပြီး တရားနာခဲ့ရတာ။
တရားကိုလည်း Emotions management (workshop) လို့ အမည်ပေးထားတာ။
အပြန်အလှန်လေးစားသမှုနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာကို အဲဒီဆရာတော်က အများကြီး နားလည်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: ဘုန်းကြီး အသာထားလို့ ခိုနီဒုံကို အယင် နိုင်အောင်တိုက် အလျှာတိုလာ လျှာပွတ်သခင် အူးမာမွတ်…။
ဦးဦးပါလေရာ says: 1. ဘုန်းကြီးဆေးကုတာ ၀ိနည်းနဲ့တော့မညီပါဘူး..။
(အခုလိုရာတော်က ကျန်းမာရေးပညာပေးတာတော့ ၀ိနည်းနဲ့ညီရုံမက လေးစားချီးကျုးဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်)
2. ဒါပေမယ့်လဲ ဒီနိုင်ငံမှာ ဘုန်းကြီးရယ်လို့ပေါ်ကတည်းက ဆေးကုလာတယ်ထင်တာပဲ..
သမိုင်းတစ်လျှောက် လူပေါင်း အသက်ပေါင်း သိန်းသန်းချီ ကယ်တင်ခဲ့ပါတယ်.. လောကဘက်ကကြည့်ရင် အလွန်ကျေးဇူးများပါတယ်။
3. ဘုန်းကြီးတွေနေရာတကာပါနေတာ အကောင်းဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး..
သို့သော် ဘုန်းကြီးတွေဆိုရာမှာ ဘုန်းကြီးနှင့်တကွ ဘုန်းကြီးနားက၀န်းရံနေတဲ့ တကာတကာမအသိပညာရှင် အတတ်ပညာရှင်များလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်..။
ဒါကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းအများစုဟာ တရားဝင်အင်ဂျင်နီယာမအပ်ပဲဆောက်ပေမယ့် စံမီနှုံးမီ ဖြစ်နေတာပါပဲ။
ပြောချင်တာက ဒီနိုင်ငံမတော့ ဘုန်းကြီးတွေ နေရာတကာ အလုပ်ဖြစ် အကျိုးရှိတုန်းပဲ.. ဖြစ်တယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ဆိုင်ရာပရိုတွေက လက်လွှဲယူသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ကလဲအဲသည်နေ့ကို စောင့်နေတာပါ။ ဘုန်းကြီးတွေ လောကီဖက်မှာ roll ကျသွားမှ သီလသမာဓ်ပညာ သိက္ခာသုံးရပ်ဖက် အလေးတင်းပြီး သာသနာပိုသန့်စင်သွားမယ် ယုံကြည်လို့ပဲ။
4. ကျုပ်အသက် ငါးဆယ်ကျော်အတွင်းမှာတော့ ဒီနိုင်ငံက ပရိုဖက်ရှင်နယ်တွေ ဆိုင်ရာဘာသာရပ်မှာ အဆုံးစွန် သူဖြူကိုယ်မဲ ကွဲလွဲကြတာ တွေ့ရပါများလို့- ဒီနိုင်ငံက ပရိုတွေလက်ချက်နဲ့ ဒုက္ခရောက်ရပါများလို့ အင်မတန် မှတ်သားမိနေပါပြီ။ အခုလဲ ကျုပ်အသက်ကို ပရိုတွေလက်မျက်စိမှိတ်မအပ်နိုင်လို့ တော်တော်တန်တန်ရောဂါလောက်ကို ကိုယ့်ဘာသာကုနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ (ကုလဲကုနိုင်ပါတယ်)။ ကိုယ့်သားသမီးအရင်းကိုလဲ ကုပါတယ်။
ကြုံလို့ တခွန်းထည့်ရရင် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာက ကျုပ်အမတစ်ယောက် ရန်ကုန်က အင်မတန့်အင်မတန်နာမည်ကြီး အရိုးအကြောဆရာဝန်ကြီးကိုပြတော့ လေးနာရီစောင့်ရပြီး ဆေး ၇ မျိုးပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဆေး အကုန်နီးပါးက အများသုံး brand တွေမဟုတ်ပဲ composition တူတဲ့ အခြားနာမည်နဲ့ ဈေး 3-4 ဆ နဲ့ပါ။ စိတ်ဝင်စားလို့ လေ့လာကြည့်လိုက်တော့ အဲ့ဆေး ၇မျိုးမှာ အရိုးအကြောနဲ့ဆိုင်တာ ၁မျိုးနဲ့ အနာအကျဉ်သက်သာတာ ၁ မျိုးပဲပါပါတယ်။ ကျုပ်က ပရိုပညာရှင်တွေရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကို မစွက်ဖက်ပေမယ့် ကြားသိရတဲ့ရလာဒ်အရ လုံးဝ သက်သာပျောက်ကင်းမှု့မရှိကြောင်း ကြားရတယ်။
5. နိဂုံးကတော့ …. အဲတော့… ဘုန်းကြီးတွေသွားအားကိုးတာဘာဆန်းမလဲ….
ကျုပ်တောင် ဆေးနည်းသိချင်ရင် ဆရာဝန်မမေးဘူးး ဘုန်းကြီးပဲမေးတယ်..
kai says: ရှင်းရေးတာ ကြိုက်ပါတယ်..။ လက်တွေ့ကျသကိုး..
ဆိုတော့… ဗမာလို.. ကံ-ကံရဲ့အကျိုး.. ။ ဘိုလို cause and effect လို့.. ပြောချင်…။
ဒါလုပ်လို့.. ဒါဖြစ်တာပဲ.. ခံစေ…ုါ်
ခင်ဇော် says: ဆရာတော် ဦးဇောတိက က ဆရာဝန် မဟုတ်ဘူးလားးး
ဘုန်းကြီးနဲ့ ဝေးတဲ့သူမို့ သိတာမြန်း မှားနေရင် ခွေးလွှတ်ကြပါ။